ကုိယ္နဲ႔ ဖူးစာ ပါမပါ ဘယ္လုိ တြက္ၾကည့္မလဲ - ThutaSone
February 9, 2019 ThutaSone ဘဝနဲ့အချစ် 0
ကုိယ္နဲ႔ ဖူးစာ ပါမပါ ဘယ္လုိ တြက္ၾကည့္မလဲ ..
ကုိယ္နဲ႔ ဖူးစာ ပါမပါ ဘယ္လုိ တြက္ၾကည့္မလဲ ..။မိန္းကေလး ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၊ ေယာက်္ားေလး ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ..ကုိယ္နဲ႔ နဖူးစာ ပါ၊ မပါ တြက္ၾကည့္လုိ႔ရပါတယ္။ဒီနည္းလမ္းေလး ဟာ နာမည္ေက်ာ္ ေဗဒင္ ဆရာ စံဇာဏီဘုိ ရဲ႕ တြက္ခ်က္နည္း ၊ နည္းလမ္းေလး နဲ႔ အက်ဳိးဆက္ကုိ ရယူထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။သူ ရဲ႕ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္အားလံုးေပါင္းၾကည့္ ၊ေနာက္ဆံုး ရလာတဲ့ကိန္းတစ္လံုးက အေျဖျဖစ္ပါတယ္။
(၄) ရတဲ့သူက သင္နဲ႔သူ႔ရဲ႕အခ်စ္ဟာ ေစးကပ္ကပ္ႀကီးလိုျဖစ္ေနတယ္။ ဘယ္လို ခြာခြာ ခြာလို႔မရတဲ့ပံုစံ၊ ဘဝကိုဘယ္လိုျဖတ္သန္းရမွန္းမသိတဲ့ ပုံစံနဲ႔တူေနတယ္။ သင္ကလည္း အိေႁႏၵရွင္ပီသစြာနဲ႔ သူ႔ကိုခ်စ္တယ္ လို႔ ဖြင့္ေျပာဖို႔မရဲဘူးျဖစ္ေနတယ္။ဒါေၾကာင့္ ဟိုဖက္ကိုလည္းမသြား၊ ဒီဖက္ကိုလည္း မေရာက္ျဖစ္ေနတာေ ပါ့။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္ေခါင္းခ်င္း ဆုိင္ၿပီး ျပႆနာကိုတူတူေျဖရွင္းၾကတာအေ ကာင္းဆံုးပဲေလ။မဟုတ္ရင္ေတာ့ သင္တို႔ထဲကတစ္ေယာက္မဟုတ္တစ္ေယာက္ဟာ အသစ္ေတြ႕ၿပီး သင္တို႔ရဲ႕ဇာတ္လမ္းေလးက ဇာတ္သိမ္းသြားလိမ့္မယ္ေနာ္။
ေက်းဇူးမေမ့နဲ႔၊ ေက်းဇူးမေမ့နဲ႔ဆိုတာ သူ႔ပါးစပ္ကေျပာလာတဲ့စကားေတြေပါ့ ။ေပြလည္းေပြတယ္။ ကပ္ေစးလည္းနဲတယ္။ဆိုးေသာအရသာမ်ိဳးစံုနဲ႔ျပည့္စံုေနတဲ့သူေပါ့။ သင္နဲ႔ရည္းစား လာျဖစ္တာကလည္း အေထြအထူးမဟုတ္ပါဘူး။super casanova ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ထူးႀကီးေၾကာင့္ပဲျဖစ္တယ္။သင္ဟာ ႐ုပ္မရွိရင္အဲဒီတစ္ေယာက္က သင့္ကိုမ်က္ေစာင္းေလးေတာင္ ထုိးၾကည့္မွာမဟုတ္ဘူး။ၿပီးေတာ့ သင္မသိေသးတဲ့ သူ႔ရဲ႕အတြဲေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ဂိုေဒါင္ႀကီးထဲထည့္ထားရတဲ့အထိ၊ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ေ နာက္ဆံုးအခ်စ္ျဖစ္ခြင့္ကေတာ့ လံုးဝမေမွ်ာ္လင့္ေနပါနဲ႔ေတာ့ေနာ္။
(၈) ရတဲ့သူက သူ႔ရဲကေနာက္ဆံုးအခ်စ္ျဖစ္ဖို႔အခြင့္အေရးဟာ ၅ဝ% = ၅ဝ% ပါပဲ။ သင္တို႔အခ်စ္ဟာ ၾကာၿပီး အားလံုးေနရာက်ေနၿပီေလ။ တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကိုတစ္ေယာက္သိေနၿပီေလ။
ဒါေၾကာင့္ အတူေနတဲ့အခ်ိန္ဆို စိတ္ခ်မ္းသာရတယ္။ အဲဒီစိတ္ခ်မ္းသာတာကခ်ိဳတာေတြ romatic တာေတြ မရွိတဲ့ ခံစားခ်က္၊ သဝန္္တုိျခင္း၊ လိုခ်င္တပ္မက္မႈမရွိတဲ့အခ်စ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္တို႔အခ်စ္က သၾကားျပတ္သြားတဲ့အခ်စ္နဲ႔တူတယ္ေလ။သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္က တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္သိၾကမွာပါ။ တစ္ေယာက္အေပၚတစ္ေယာက္ဘယ္ေလာက္နားလည္ႏုိင္စြမ္းရွိတယ္ဆိုတာ သူ႔အျပင္သင့္အေပၚမွာေ နာက္ထပ္နားလည္ႏုိင္မယ့္သူလည္း ရွာလို႔ေတြ႕ေတာ့မွာမဟုတ္ေတာ့ဘူးေလ
(၉) ရတဲ့သူက အား႐ုိး႐ုိး… သင္တို႔အခ်စ္ကိုႏိႈင္းရရင္ေတာ့ နံနက္ေနထြက္ခ်ိန္နဲ႔ ညေနေနဝင္ခ်ိန္၊ ေကာင္း ကင္နဲ႔ေျမႀကီး၊သူခ်မ္းသာနဲ႔သူဆင္းရဲ႕၊ နတ္ပန္းနဲ႔ ငရဲပန္း စတာေတြေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ သင္တို႔အခ်စ္ကို သင္တို႔ကိုယ္တုိင္ေတာင္ နားမလည္ႏုိင္ပဲျဖစ္ေနရတယ္။
ေနာက္ထပ္ ဘာထူးဆန္းစရာေတြ ထပ္လာဦးမလဲဆိုၿပီးေတာ့ သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕အခ်စ္အေၾကာင္းဟာ ဟာသတစ္ပုဒ္လိုပဲျဖစ္ေနတယ္။ သင္တို႔ႏွစ္ဦးကလည္းသိေနတယ္ေလ။ ၾကာရွည္လက္တြဲလို႔မရဘူးဆိုတာေပါ့။ခဏတစ္ျဖဳတ္ေလးလက္တြဲ တာကလည္း ကိုယ့္ဘဝမွာရယ္စရာအမွတ္တရအျဖစ္ထားခဲ့ခ်င္လို႔ပဲျဖစ္တယ္။
သင္တို႔ႏွစ္ဦးဟာအလြန္ျခားနားလြန္းလို႔ တူတူသြားလို႔မရဘူးဆိုၿပီးေတာ့ေပါ့။ သင္တို႔ႏွစ္ဦးလမ္းခြဲသြားခဲ့ရင္လည္း သူငယ္ခ်င္းေ ကာင္းေတြဆက္ျဖစ္ဦးမွာပါ။အေပၚမွာ တြက္ခ်က္တဲ့ ပုံစံအတုိင္းဆုိရင္ နံပါတ္ ၈ ဂဏန္း ရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ကုိ ၾကည့္ရႈလုိက္ရုံပါပဲ ..။ဒီေနရာမွာ တစ္ခု ေျပာခ်င္တာကတခ်ဳီ႔ကိစၥေတြကုိ ဥပါဒါန္ေၾကာင့္ ဥပါဒ္ မျဖစ္ေစခ်င္တာပါပဲ ..။
ကိုယျနဲ့ ဖူးစာ ပါမပါ ဘယျလို တှကျကွညျ့မလဲ ..
ကိုယျနဲ့ ဖူးစာ ပါမပါ ဘယျလို တှကျကွညျ့မလဲ ..။မိနျးကလေး ပဲ ဖွစျဖွစျ ၊ ယောကြျားလေး ပဲ ဖွစျဖွစျ ..ကိုယျနဲ့ နဖူးစာ ပါ၊ မပါ တှကျကွညျ့လို့ရပါတယျ။ဒီနညျးလမျးလေး ဟာ နာမညျကြောျ ဗဒေငျ ဆရာ စံဇာဏီဘို ရဲ့ တှကျခကြျနညျး ၊ နညျးလမျးလေး နဲ့ အကြိုးဆကျကို ရယူထားတာ ဖွစျပါတယျ။သူ ရဲ့ မှေးနေ့သက်ကရာဇျအားလုံးပေါငျးကွညျ့ ၊နောကျဆုံး ရလာတဲ့ကိနျးတစျလုံးက အဖွဖွေစျပါတယျ။
သငျ့မှေးနေ့ + သငျ့ခစြျသူမှေးနေ့ = အဖွေ
အဖွကေ 8 ပေါ့။
(၁) ရတဲ့သူကတော့ သငျဟာသူ့ကိုအသကျပေးနိုငျလောကျအောငျခစြျပမေယျ့ သူ့အတှကျကတော့ ရညျးစားဟောငျးကပစျသှားလို့ အသဲကှဲပွီးခဏလာနားတဲ့ Bus ကားမှတျတိုငျလိုဖွစျနတောပါ။သငျနဲ့အ တူနတေဲ့အခြိနျမှာ သူဟာပြောျရှှငျနပေမေယျ့ အဲဒီပြောျရှှငျခွငျးက ဟိုမရောကျဒီမရောကျနဲ့ဖွစျနတေတျ တယျ။
ဘာဖွစျလို့လဲဆိုတော့ ပှရှေုပျတတျတဲ့သူ့အကငြ့ျက သငျ့ထကျသာမယျ့သူကို အမွဲတမျးရှာဖှနေလေို့ ပဲဖွစျတယျ။ဒါကွောငျ့ သူ့ရဲ့ နောကျဆုံးအခစြျဖွစျဖို့အခှငျ့အလမျးဟာ မြောကျတစျကောငျ သစျပငျပေါျကွ ပုတျကတြာနဲ့ အတူတူလိုဖွစျနတောပါ။နောငျ Bus ကားအသစျဟာသူ့ဆီဆိုကျကပျလာခဲ့ရငျ သူတစျခါ တညျးပွေးတကျသှားဖို့ဝနျလေးမှာမဟုတျသလို သငျ့ကိုဘယျလိုဖွစျပွီး ကနြျခဲ့မှာလဲဆိုပွီး ခေါငျးပွနျေ စာငျးငဲ့ဖို့တောငျအခြိနျရှိမှာမဟုတျဘူး။
(၂) ရတဲ့သူကတော့ သငျနဲ့သူဟာ ခစြျတော့ခစြျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မုနျးတီးမှုနဲ့ပေါကျဖှားလာတဲ့ ခစြျခွငျးဖွစျတယျ။တူတူနခေဲ့ရငျလညျး လကျဝှေ့ပှဲကိုကွညျ့နရေသလို နေ့စဉျထသတျမှာအမှနျပါပဲ။ အကြ ငျ့တှကေလညျး တစျယောကျနဲ့တစျယောကျ မတူကွပါဘူး။ တစျယောကျပွငျးလာရငျ ကနြျတဲ့တစျယောကျ ကလညျး အလြှော့ပေးမှာမဟုတျဘူး။ဒါတောငျမှ သငျတို့မှာသုံးပှငျ့ဆိုငျမရှိသေးဘူးနောျ။ တစျနေ့ကရြငျ သူကခဏဝေးဝေးလောကျ နကွေညျ့ကွရအောငျ လို့ပွောလာခဲ့ရငျသငျသူ့ကိုနားလညျပေးလိုကျပါ။ သူက သငျ့ကိုမခစြျတာမဟုတျပါဘူး။တစျယောကျကိုတစျယောကျ နားလညျနိုငျတဲ့အခြိိနျတစျခုလောကျတော့ ထားပေးလိုကျကွပေါ့နော့
(၃) ရတဲ့သူက Yahoo! နောကျဆုံးတော့လညျး သငျက အစစျအမှနျကိုတှေ့တာပဲလေ။ သငျတို့နှစျယောကျ ရဲ့တှေ့ဆုံခွငျးဟာ ရစေကျလို့ခေါျလို့ရတယျ။ ဘာပဲဖွစျဖွစျတူညီနတောပဲ။အကငြ့ျ၊ အကွိုကျ၊ညစျပတျခွငျး ၊ ပေါခွငျး၊ အရူးထခွငျးတှပေေါ့။ ဒါကွောငျ့ သူ့ကိုတှေ့တဲ့အခြိနျဆို ကိုယျ့ကိုယျကိုမှနျကွညျ့နရေသလိုပဲ။ သငျတို့အခစြျဟာ ဘာအရသာမှမရှိပမေယျ့ ခိုငျမွဲမှုရှိတာတော့အမှနျပဲလေ။
ကွညျ့လိုကျတာနဲ့နှလုံးသားထွိ မငျရတယျဆိုတာပေါ့။ အဲ..တစျခုတော့ရှိတယျ။ သငျသတိထားရမှာက ကိုယျ့စိတျကိုယျပဲ၊ သငျ့အတှကျသူ ဟာ ငွီးငှေ့စရာကောငျးနတေယျ။ ဒါကွောငျ့သငျဟာ ဒီထကျပိုကောငျးတဲ့အခစြျတှကေိုရှာဖှနေတေယျ ။နောကျဆုံးတော့လညျး ဘယျလူမှ သငျ့ရဲ့အခုလိုအရသာမရှိတဲ့ ပေါရှှတျရှှတျလူထကျ ပိုပွီးကောငျးမှာ မဟုတျဘူးဆိုတာသငျသိလိမျ့မယျ။ မသိနိုငျဘူးလေ။ အဲဒီအခြိနျ ရောကျခဲ့ရငျ နှောငျးခငြျလညျးနှောငျး သှားမှာပေါ့။
(၄) ရတဲ့သူက သငျနဲ့သူ့ရဲ့အခစြျဟာ စေးကပျကပျကွီးလိုဖွစျနတေယျ။ ဘယျလို ခှာခှာ ခှာလို့မရတဲ့ပုံစံ၊ ဘဝကိုဘယျလိုဖွတျသနျးရမှနျးမသိတဲ့ ပုံစံနဲ့တူနတေယျ။ သငျကလညျး အိန်ဒွရှေငျပီသစှာနဲ့ သူ့ကိုခစြျတယျ လို့ ဖှငျ့ပွောဖို့မရဲဘူးဖွစျနတေယျ။ဒါကွောငျ့ ဟိုဖကျကိုလညျးမသှား၊ ဒီဖကျကိုလညျး မရောကျဖွစျနတောေ ပါ့။ အကောငျးဆုံးကတော့ သငျတို့နှစျယောကျခေါငျးခငြျး ဆိုငျပွီး ပွဿနာကိုတူတူဖွရှေငျးကွတာအေ ကာငျးဆုံးပဲလေ။မဟုတျရငျတော့ သငျတို့ထဲကတစျယောကျမဟုတျတစျယောကျဟာ အသစျတှေ့ပွီး သငျတို့ရဲ့ဇာတျလမျးလေးက ဇာတျသိမျးသှားလိမျ့မယျနောျ။
(၅) ရတဲ့သူက သငျနဲ့သူ့ရဲ့အခစြျက သှေးရဲရဲသံရဲရဲအခစြျပေါ့။ဘာဂိုဏျးညာဂိုဏျးတှေ မာဖီးယားဂိုဏျးေ တှလိုကျရငျးအသကျလုပွီးဖွစျပေါျလာတဲ့အခစြျစစျ။သငျတို့အခစြျလမျးကွောငျးမှာဘယျလောကျပဲအန်တရာယျရှိပမေယျ့ သငျတို့ကတစျယောကျနဲ့တစျယောကျကိုနားလညျပွီး နှလုံးသားအစစျနဲ့အမှနျခစြျတာဖွစျတယျ။
သငျတို့နှစျယောကျက ခုခြိနျမှာခစြျသူအဆငျ့တှမေဟုတျတော့ပါဘူး။ နှစျလှှာပေါငျးမှတစျရှကျဆိုပွီးဖွစျနကွေပါပွီ။အသကျပေးပွီးခစြျကွတဲ့ သူတှအေဆငျ့ ရောကျနကွေပါပွီ။သငျဟာသူ့ရဲ့နောကျဆုံးအခစြျမဟုတျဘူးလို့ မယုံသငျ်ကာမဖွစပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူဟာယုံကွညျနပေါပွီ။ သငျဟာ ဘုရားကပေးလာတဲ့ ဖူးစာရှငျအစစျလို့….။
(၆) ရတဲ့သူက ခုခြိနျတှမှော ဘာစားစားသကွားထညျ့ဖို့တောငမလိုပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သငျတို့အ ခစြျရဲ့ခြိုမွိနျခွငျးက သကွားရဲ့အခြိုဓာတျကိုတောငျဝါးမွိုသှားလို့ဖွစျတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ဒီပြောရှှငျမှုဟာ မပွညျ့စုံသေးဘူးလို့သငျခံစားရမယျ။ရမွေောငျးပုပျမှာ လရိပကိုမွငျရသလိုပေါ့။ သငျဟာ သငျ့ခစြျသူနဲ့ဒီလိုအမှတျတရအခြိနျလေးတှကေိုဘယျလောကျကွာကွာခံစားရဦးမလဲဆိုတာ မသခြောသေးဘူး။
သို့ပမေယျ့လညျး သငျဟာ ခုခြိနျမှာအရမျးပြောျနတေယျလို့တော့ ပွောနိုငျတယျလေ။ အကယျလို့ သူ့ပွဿနာ တစျခုခုရှိပွီး သငျ့ကိုမသိစခေငြျရငျလညျး သငျက ဘာမှမသိသလိုနမှောအသအေခြာပဲ။သငျဟာသူ့ရဲ့ေ နာကျဆုံးအခစြျဖွစျပွီလားလို့မေးရရငျတော့ သငျ့ရဲ့အစှမျးအစပေါျမှာမူတညျပါတယျ။ ပွီးတော့ သူ့ရဲ့ခိုငျမာမှု နဲ့လညျးဆိုငျတယျလေ။ သူ့ရဲ့ပွဿနာကိုဖွရှေငျးနိုငျရဲ့လားဆိုတာ.
(၇) ရတဲ့သူက ဒီတစျယောကျကသငျ့ကိုအမွငျရှငျးသှားအောငျလုပျပေးနိုငျစှမျးရှိတယျ။ အနိမျ့စား လူ တစျယောကျကဘယျလိုလဲဆိုတာပေါ့၊ဘာဖွစျလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီသူနဲ့အတူပါလာတာက တစျကိုယျကောငျး ဆနျစိတျ၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုအထငျကွီးမှု၊ အမြားကွီး အမြားကွီးပေါ့။ သငျ့ကိုတစျခုခုကူညီလိုကျရငျ ကြေးဇူး အတငျခံခငြျတာကအရငျပေါ့။
ကြေးဇူးမမေ့နဲ့၊ ကြေးဇူးမမေ့နဲ့ဆိုတာ သူ့ပါးစပျကပွောလာတဲ့စကားတှပေေါ့ ။ပှလေညျးပှတေယျ။ ကပျစေးလညျးနဲတယျ။ဆိုးသောအရသာမြိုးစုံနဲ့ပွညျ့စုံနတေဲ့သူပေါ့။ သငျနဲ့ရညျးစား လာဖွစျတာကလညျး အထှအေထူးမဟုတျပါဘူး။super casanova ဆိုတဲ့ ဂုဏျထူးကွီးကွောငျ့ပဲဖွစျတယျ။သငျဟာ ရုပျမရှိရငျအဲဒီတစျယောကျက သငျ့ကိုမကြျစောငျးလေးတောငျ ထိုးကွညျ့မှာမဟုတျဘူး။ပွီးတော့ သငျမသိသေးတဲ့ သူ့ရဲ့အတှဲပေါငျးမြားစှာကိုလညျး ဂိုဒေါငျကွီးထဲထညျ့ထားရတဲ့အထိ၊ ဒါကွောငျ့ သူ့ရဲ့ေ နာကျဆုံးအခစြျဖွစျခှငျ့ကတော့ လုံးဝမမြှောျလငျ့နပေါနဲ့တော့နောျ။
(၈) ရတဲ့သူက သူ့ရဲကနောကျဆုံးအခစြျဖွစျဖို့အခှငျ့အရေးဟာ ၅ဝ% = ၅ဝ% ပါပဲ။ သငျတို့အခစြျဟာ ကွာပွီး အားလုံးနရောကနြပွေီလေ။ တစျယောကျအကွောငျးကိုတစျယောကျသိနပွေီလေ။
ဒါကွောငျ့ အတူနတေဲ့အခြိနျဆို စိတျခမြျးသာရတယျ။ အဲဒီစိတျခမြျးသာတာကခြိုတာတှေ romatic တာတှေ မရှိတဲ့ ခံစားခကြျ၊ သဝနျျတိုခွငျး၊ လိုခငြျတပျမကျမှုမရှိတဲ့အခစြျဖွစျနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သငျတို့အခစြျက သကွားပွတျသှားတဲ့အခစြျနဲ့တူတယျလေ။သငျတို့နှစျယောကျက တစျယောကျကိုတစျယောကျသိကွမှာပါ။ တစျယောကျအပေါျတစျယောကျဘယျလောကျနားလညျနိုငျစှမျးရှိတယျဆိုတာ သူ့အပွငျသငျ့အပေါျမှာေ နာကျထပျနားလညျနိုငျမယျ့သူလညျး ရှာလို့တှေ့တော့မှာမဟုတျတော့ဘူးလေ
(၉) ရတဲ့သူက အားရိုးရိုး… သငျတို့အခစြျကိုနှိုငျးရရငျတော့ နံနကျနထှေကျခြိနျနဲ့ ညနနေဝေငျခြိနျ၊ ကောငျး ကငျနဲ့မွကွေီး၊သူခမြျးသာနဲ့သူဆငျးရဲ့၊ နတျပနျးနဲ့ ငရဲပနျး စတာတှပေေါ့။ ဒါကွောငျ့ သငျတို့အခစြျကို သငျတို့ကိုယျတိုငျတောငျ နားမလညျနိုငျပဲဖွစျနရေတယျ။
နောကျထပျ ဘာထူးဆနျးစရာတှေ ထပျလာဦးမလဲဆိုပွီးတော့ သငျတို့နှစျယောကျရဲ့အခစြျအကွောငျးဟာ ဟာသတစျပုဒျလိုပဲဖွစျနတေယျ။ သငျတို့နှစျဦးကလညျးသိနတေယျလေ။ ကွာရှညျလကျတှဲလို့မရဘူးဆိုတာပေါ့။ခဏတစျဖွုတျလေးလကျတှဲ တာကလညျး ကိုယျ့ဘဝမှာရယျစရာအမှတျတရအဖွစျထားခဲ့ခငြျလို့ပဲဖွစျတယျ။
သငျတို့နှစျဦးဟာအလှနျခွားနားလှနျးလို့ တူတူသှားလို့မရဘူးဆိုပွီးတော့ပေါ့။ သငျတို့နှစျဦးလမျးခှဲသှားခဲ့ရငျလညျး သူငယျခငြျးေ ကာငျးတှဆေကျဖွစျဦးမှာပါ။အပေါျမှာ တှကျခကြျတဲ့ ပုံစံအတိုငျးဆိုရငျ နံပါတျ ၈ ဂဏနျး ရဲ့ အကြိုးဆကျကို ကွညျ့ရှုလိုကျရုံပါပဲ ..။ဒီနရောမှာ တစျခု ပွောခငြျတာကတခြီု့ကိစ်စတှကေို ဥပါဒါနျကွောငျ့ ဥပါဒျ မဖွစျစခေငြျတာပါပဲ ..။